Oku kulula kakhulu ikhawuntara yomnyangoinikwe amandla kuphela yibhetri. Uninzi lwethu Izixhobo zokubala emnyango Iimveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi. Ukuthintela ukukopa, khange sibeke umxholo omninzi kwiwebhusayithi. Ungaqhagamshelana nabasebenzi bethu bokuthengisa ukuze bakuthumele ulwazi oluthe kratya malunga nathi izixhobo zokubala emnyango.
Inani lokuhamba kwabahambi kungoku nje yeyona nkokeli inkulu kwimarike. Ngaphantsi kwefuthe lendawo, ubume bendawo, ukugcwala kwabantu kunye nezinye izinto, uhlalutyo kunye neenkcukacha zamanani abakhweli abahamba zinokwenziwa ngokwesayensi nangempumelelo, kwaye izigqibo zokusebenza kwimarike yonke zingenziwa ngexesha elifanelekileyo inkqubela. Indima ebalulekileyo yemodeli yeshishini lokuthengisa, ukusetyenziswa kweendlela zesayensi ukuqokelela idatha yokuhamba kwabahambi yindlela yokuqonda amathuba oshishino kuyo yonke intengiso.
I-HPC001 counter counter sisixhobo sokubala ukubala ukuhamba kwabahambi. Incinci, ilula, kwaye kulula kakhulu ukuyifaka. Ikwabonelela ngolawulo lwedatha olubanzi. Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ezahlukeneyo zabathengi, ifakwe kwaye isetyenziswa kwiivenkile ezinkulu, ezivenkileni, nakuko konke ukungena kwevenkile. Kuphuhlisiwe, HPC001 izixhobo zokubala emnyangounokubala ngokulula inani lokuhamba kwabahambi ngexesha ngalinye losuku, elilungele ukunika abathengisi ireferensi yenkqubo. Ngotshintsho kwindlela yokuhamba yabakhweli, indawo yonke inokwabiwa ngokufanelekileyo, imithombo yoluntu inokucwangciswa ngokwasemthethweni, kwaye iindleko zokusebenza zevenkile ezinkulu kunye nevenkile ezinkulu zingalawulwa. Ngokuthelekisa ukuhamba kwabahambi ngamaxesha ahlukeneyo, iindlela zokuthengisa kunye nezokunyusa zinokuhlengahlengiswa, ezonyusa kakhulu umdla kwiivenkile ezinkulu. Kufanelekile kwiindawo zentengiso, indawo yenkcubeko kunye nezemidlalo, indawo zolonwabo, iindawo zikawonke-wonke kunye nezinye iindawo.
Iimpawu zokubala zomnyango we-HPC001
1. HPC001 ikhawuntara yomnyango Iilwimi ezimbini ezisebenzayo, isiTshayina nesiNgesi.
2. 1.15 intshi LCD screen.
3. Inkqubo izixhobo zokubala emnyango Ibhetri inokutshintshwa rhoqo emva kweenyanga ezintandathu ukuze isebenze, elula kwaye elula.
Ukucwangciswa okulula kunye nolawulo, olunokuqhutywa ngamaqhosha ekhawuntareni.
5. Inkqubo ye ikhawuntara yomnyango Kufuneka kuphela ukwenza ulawulo lokubala ngokusebenzisa iWindows, akukho software eyongezelelweyo efunekayo.
6. Ubungakanani obuncinci (113 * 67 * 20 mm) kunye nobunzima bokukhanya obuyi-213 gram.
7. Isibane kwi izixhobo zokubala emnyango Umboniso uya kukhanya xa umntu edlula.
8. Ukukhawulezisa kuya kuvela kumboniso xa ibhetri iphantsi.
9. Ukukhawulezisa kuya kuvela kumboniso xa uphawu luthathaka.
10. Ngokwesiqhelo ukubala kuluhlu lweemitha ezi-2.5, kodwa kunokuhlaziywa ukuya kwi-9 yeemitha ngaphandle kokuphazamiseka.
11. Inkqubo ye izixhobo zokubala emnyango Imemori yangaphakathi inokugcina ubuncinci iiyure ezingama-500 zeerekhodi.
12. Isiseko seplastiki kunye nesixhobo esidibeneyo sesakhelo sinokukhethwa ngokuthanda.
13. Inkqubo ye izixhobo zokubala emnyango Idatha inokukhutshwa ngumhla kunye nexesha.
Sineentlobo ezininzi ze-IR ikhawuntara yomnyango, 2D, 3D, AI emnyango abantu counter, kuhlala kukho enye eya kukufanela, nceda unxibelelane nathi, siya kuncoma eyona ilungileyo ikhawuntara yomnyango yeyakho ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Abantu be-MRB emnyango baphikisana nevidiyo ye-HPC005
Egqithileyo Abantu abazenzekelayo be-MRB baphikisana ne-HPC005S
Okulandelayo: I-MRB yokuthengisa itrafikhi yokuthengisa kubantu abathengisayo ababala i-HPC002
I-infrared Beam Counter yabantu
Izixhobo zokubala ze-Infrared
I-infrared Beam Abantu Bala
I-infrared Beam yokuBala yaBantu
I-MRB yokuthengisa itrafikhi yokuthengisa kubantu abathengisanayo ...
Umatshini wokubala we-MRB USB wevenkile ye-HPC015U
I-MRB engenazingcingo yabantu bedijithali abaphikisana neHPC005U
Abantu abazenzekelayo be-MRB baphikisana ne-HPC005S